Android 12 ikozvino yave kuwanikwa yako Raspberry Pi 4 | Linux Addicts
Isaac | 13/11/2021 19:26 | Noticias, Resources
Iye zvino unogona kutanga kuedza Android 12 kubva kuRaspberry Pi 4 yako, 400 kana CM. Sezvaunonzwa, kunyangwe nharembozha yako ichiri kusatsigira kuburitswa kwazvino kweGoogle's system yekushandisa, ikozvino unogona kuiedza uye kuyedza nhau dzese kutenda kuXDA KonstaT (KonstaKANG) uye kuunganidzwa kusiri kwepamutemo kweLineageOS 19.0, iyo yakavakirwa chaizvo. pavhezheni 12.
Uye chokwadi ndechekuti haingoshandire kuyedza chete, asi inogona kushanda seyako yakajairika sisitimu yekushandisa, kubvira inoshanda chaizvo, semamwe masisitimu anoshanda akagadzirirwa iyo Raspberry Pi. Iwe unozongo dhawunirodha mufananidzo weiyo inoshanda sisitimu yakavakirwa pa Android 12 uye woiendesa kune microSD memori kadhi, sezvaungaita senge chero imwe OS.
Paunotanga iyi Android inoshanda sisitimu hauzove nekutanga kumisikidzwa kweGoogle account kana chero chinhu chakadaro, unongotanga iyo system kubva kuSD wopinda desktop chikamu. Iwe uchaona kuti une nzvimbo mbiri dzekushanda dziripo nekusarudzika, kunyangwe iwe uchigona kuigadzirisa zviri nyore kuti uchinje majeti, Wallpaper, nezvimwe.
Iwe unogona batanidza neinternet kuburikidza neDualBand WiFi sekune dzimwe OS, uye zvakare vane Bluetooth rutsigiro. Saka iwe unogona kudhawunirodha mapurogiramu matsva, kusefa mambure nebrowser, nezvimwe. Kune rimwe divi, iyo interface ndeyemvura uye iri nyore kushandisa, ichikubvumira kuti utsvedze chidzitiro sezvaungaite nenharembozha, asi nekudzvanya kwegonzo kuenda kumamenu uye maapplication aripo (Calculator, File Manager, Calendar. , Mazita, Clock, Voice rekodhi, Photo gallery, Music, Web browser, Kamera, Settings…).
Zvinoita sekunge pane matambudziko ekuisa maapp matsva, kunyangwe Google Play iripo. Ndinovimba vachagadzirisa izvo munguva pfupi ...
Iwe unozogona kunakidzwa akawanda Android 12 maficha pane yako Pi, kusanganisira nzira yakasviba, tsigiro yeakawanda-touch anoratidza, anosanganisira USB zviratidziro, kana Waveshare SPI, nezvimwe. Nekudaro, kuchine zvimwe zvirambidzo, sekutamba kwemavhidhiyo eYouTube, izvo zvisati zvave kuitwa muHD kana FullHD resolution. Mugadziri ari kushanda pazviri, kuwedzera mamwe macodecs.
Iwe unogona zvakare kubatanidza kune zviteshi zveRaspberry Pi yako yakawanda yekutenderera, senge ekunze hard drive kana pendrivers, mbeva uye keyboard. USB, nezvimwewo. Inosanganisira rutsigiro rweGPIO, SPI, USB-C (ADB, MTP, PTP), masensa (accelerometers, gyroscope, humidity, magnetometer, pressure, tembiricha), GPS nekushandisa yekunze USB module seU-Blox 7, Ethernet, HDMI. uye HDMI-CEC inoratidza, uye I2C IR zvinodzora zviri kure, zvine ma module.
Dhawunirodha iyo inoshanda sisitimu mufananidzo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Android 12 ikozvino yave kuwanikwa kune yako Raspberry Pi 4